27 Archives - Page2of4- Tameelay
May 27, 2020 daddy Comments Off on ” မွနျမာမလေး ပီသပါစေ “
” မွနျမာမလေး ပီသပါစေ ” အသညျးကှဲလို့ ဘီယာနဲ့လေ စိတျဖွသေတဲ့လား သူငယျခငျြး အသညျးဆိုတာ ကှဲတတျတဲ့အရာ ကှဲမှာပဲမို့ သချါရလို့ မှတျယူလိုကျပါကှာ ဘီယာတဈခှကျ ဦးနှောကျကလာပျစီးပကျြစီးစတော ဆေးသုတသေနပွောကွားခဲ့တယျ မွတျဘုရားက ဟောကွားညှနျပွသရေညျသောကျရငျ ဖွဈရာဘဝရူးကွရတယျ ခုနမွေငျသမြှ အရူးတှကေ အတိတျဘဝက အရကျသမားတှေ မသခေငျပငျ ကတုနျကယငျ ဦးနှောကျယှငျးခြို့ကပျြမပွညျ့သို့ ယိုယှငျးလပွေီ အသိတှေ သပွေီးခါလညျး အပါယျငရဲ သကျဆငျးနဈမြော အပူတောထဲ ဒုက်ခပူတှေ ကွောကျတတျပါကှာ မွနျမာမိနျးကလေး […]
May 27, 2020 daddy Comments Off on ခဈြခွငျးရဲ့နောကျကှယျ
ခဈြခွငျးရဲ့နောကျကှယျ သူကတော့ထငျနလေိမျ့မယျ .ကမြစိမျးကားသှားတယျပေါ့လို့..တဈကယျတော့လေ ကမြစိမျးကားသှားတာမဟုတျရပါဘူး.ရှောငျဖယျပေးခဲ့ရတာပါ။ သူ့အနားက.လိပျပွာတှနေဲ့.ကမြ..ရောရောထှေးထှေးမနတေကျလို့.သူရဲ့သာယာမှု့.ကနြေမျမှု့.. သူရဲ့ပြျောရှငျမှု့တှကေို.ဦးစားပေးပွီး.. ကမြ..အဝေးကိုပုနျးရှောငျပေးခဲ့တာပါ။ ဟိုတဈခြိနျက.သူနဲ့ကမြ.ခဈြခဲ့ကွတုနျးက.. အပွနျအလှနျပို့ဖူးတဲ့..မကျဆငေ့်ျခတြှကေို..ဘယျနှဈကွိမျမွောကျမှနျးမသိ.ပွနျဖတျနမေိတယျ.သူပွောဖူးတဲ့စကားသံတှေ.နားထဲမှာအခါခါပွနျကွားယောငျနမေိတယျ သူ့ဆိုပွဖူးတဲ့.သီခငျြးသံကိုပဲထပျတလဲလဲနားထောငျနမေိတယျ..သူ့.acc လေးမီးစိမျးနတောမွငျတိုငျးလေ..ချေါခငျြတဲ့ ကမြစိတျတှကေို..အကွိမျကွိမျခြိုးနှိမျ့နရေပါတယျလေ။ သူ့ကိုရညျရှယျပွီး..ကဗြာတှရေေးတိုငျး….သတိရစိတျတှဖွေဈနရေတယျ.သူ့မသိနိုငျတဲ့နောကျကှယျမှာ…သူ့အနားကနေ ‌ကမြလညျးလေ.ကျောဖီအငှလေ့ေးလိုတဈဖွညျးဖွညျပြောကျကှယျသှားမှာအသခြောပါပဲလေ။ သူ့ကိုသတိရတဲ့စိတျလှမျးရတဲ့စိတျတှနေစေ့ဉျအမြှခံစားနရေပါတယျ သူလညျး ကမြ ကိုသတိရနမေလား လှမျးနမေလားဆိုအတှေးမြိုးလေးတှေးမိနတေယျ ဒီခြိနျထိ သူ့အတှကျဆုတောငျးပေးနမေိတုနျး သူ့တဈယောကျအစစအရာရာအဆငျပွပေါစေ သူ့ဘဝလေးအေးခမျြးပါစေ လိုအငျဆန်ဒတှအေမွနျဆုံးပွညျ့ဝပါစလေို့ဆုတောငျးရငျး မှီ ချစ်ခြင်းရဲ့နောက်ကွယ် သူကတော့ထင်နေလိမ့်မယ် .ကျမစိမ်းကားသွားတယ်ပေါ့လို့..တစ်ကယ်တော့လေ ကျမစိမ်းကားသွားတာမဟုတ်ရပါဘူး.ရှောင်ဖယ်ပေးခဲ့ရတာပါ။ သူ့အနားက.လိပ်ပြာတွေနဲ့.ကျမ..ရောရောထွေးထွေးမနေတက်လို့.သူရဲ့သာယာမှု့.ကျေနမ်မှု့.. သူရဲ့ပျော်ရွှင်မှု့တွေကို.ဦးစားပေးပြီး.. ကျမ..အဝေးကိုပုန်းရှောင်ပေးခဲ့တာပါ။ ဟိုတစ်ချိန်က.သူနဲ့ကျမ.ချစ်ခဲ့ကြတုန်းက.. အပြန်အလှန်ပို့ဖူးတဲ့..မက်ဆေ့င်္ချတွေကို..ဘယ်နှစ်ကြိမ်မြောက်မှန်းမသိ.ပြန်ဖတ်နေမိတယ်.သူပြောဖူးတဲ့စကားသံတွေ.နားထဲမှာအခါခါပြန်ကြားယောင်နေမိတယ် သူ့ဆိုပြဖူးတဲ့.သီချင်းသံကိုပဲထပ်တလဲလဲနားထောင်နေမိတယ်..သူ့.acc […]
May 27, 2020 daddy Comments Off on အိမျမကျထဲကသူ
အိမျမကျထဲကသူ ကမြတို့.နှဈယောကျရဲ့.အိမျမကျတှကေလှပါတယျဒါပမေယျ့.တဈကယျတမျးလကျတှကွေ့မှာတော့..မဟုတျပွနျဘူး.လေ။ ဘဝကခြိုမွိနျသလိုနဲ့.ခါးသီးနပွေနျတယျ..အခဈြကပူလောငျပါတယျလို့သာပွောနတေဲ့.. ကမြ..တဈကယျတမျးကတြော့..ကမြ.မစှနျ့လှတျနိုငျခဲ့ပါဘူး….။ သူ့နဲ့.ကမြ.ဂတိပေးခဲ့ပွီးခညျြနှောငျထားခဲ့ကွတယျ ဒါပမေယျ့..မတညျမွဲပါဘူး..သူ့ကို.သတိရလို့တှခေ့ငျြတဲ့.ကမြရဲ့.စိတျကူးဆန်ဒတှကေတဈကယျတမျးကွတော့.. နှလုံးသားခငျြးကနီးမလိုနဲ့..မိုငျပေါငျးမြားစှာဝေးနခေဲ့ကွပါတယျလေ.မတူညီတဲ့ဘဝအခွအေနမှော.အိမျမကျတဈခွား..ရငျဘတျကတဈခွားနဲ့.. သကျပွငျးတှအေကွိမျအကွိမျခပြွီး..အိပျယာထကျမှာလူးလိမျ့ရငျးအိပျမပြျောတဲ့ညတှမြေားခဲ့ရတယျ။ သူနဲ့.ကမြ.ပွနျဆုံဖို့မဖွဈနိုငျတဲ့အကွောငျးတှကေို..ကမြကသာ..အသိဆုံးပါ.ဝမျးနညျးစှာနဲ့အသညျးနငျ့အောငျခံစားရတာနဲ့တငျ.လှယျလှယျနဲ့မနေို့ငျအောငျကွိုးစားရမှာပေါ့..မနေို့ငျပါစလေို့ဆုတောငျးနမေိတယျ။ အခဈြဆိုတာ…သူ့ဘကျက.မပကျသကျခငျြရငျတောငျ… ကမြဘကျက.အတငျးလိုကျပကျသကျနမေိတာမြိုး ကမြ..မကျြရညျ.သိပျလှယျတယျ သူ့နဲ့ဝေးပွီးနောကျပိုငျး..ခြောငျကပျပွီးငိုခဲ့ရပေါငျးမြားစှာနဲ့ပေါ့။ သူ့ကို ကမြ ခုခြိနျထိ အိမျမကျထဲမှာတှနေ့ရေတယျတဈကယျတော့.သူ့က.ကမြရဲ့အိမျမကျထဲကလူပါ။ မှီ အိမ်မက်ထဲကသူ ကျမတို့.နှစ်ယောက်ရဲ့.အိမ်မက်တွေကလှပါတယ်ဒါပေမယ့်.တစ်ကယ်တမ်းလက်တွေ့ကြမှာတော့..မဟုတ်ပြန်ဘူး.လေ။ ဘဝကချိုမြိန်သလိုနဲ့.ခါးသီးနေပြန်တယ်..အချစ်ကပူလောင်ပါတယ်လို့သာပြောနေတဲ့.. ကျမ..တစ်ကယ်တမ်းကျတော့..ကျမ.မစွန့်လွှတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး….။ သူ့နဲ့.ကျမ.ဂတိပေးခဲ့ပြီးချည်နှောင်ထားခဲ့ကြတယ် ဒါပေမယ့်..မတည်မြဲပါဘူး..သူ့ကို.သတိရလို့တွေ့ချင်တဲ့.ကျမရဲ့.စိတ်ကူးဆန္ဒတွေကတစ်ကယ်တမ်းကြတော့.. နှလုံးသားချင်းကနီးမလိုနဲ့..မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးနေခဲ့ကြပါတယ်လေ.မတူညီတဲ့ဘဝအခြေအနေမှာ.အိမ်မက်တစ်ခြား..ရင်ဘတ်ကတစ်ခြားနဲ့.. သက်ပြင်းတွေအကြိမ်အကြိမ်ချပြီး..အိပ်ယာထက်မှာလူးလိမ့်ရင်းအိပ်မပျော်တဲ့ညတွေများခဲ့ရတယ်။ သူနဲ့.ကျမ.ပြန်ဆုံဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကို..ကျမကသာ..အသိဆုံးပါ.ဝမ်းနည်းစွာနဲ့အသည်းနင့်အောင်ခံစားရတာနဲ့တင်.လွယ်လွယ်နဲ့မေ့နိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့..မေ့နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းနေမိတယ်။ အချစ်ဆိုတာ…သူ့ဘက်က.မပက်သက်ချင်ရင်တောင်… ကျမဘက်က.အတင်းလိုက်ပက်သက်နေမိတာမျိုး ကျမ..မျက်ရည်.သိပ်လွယ်တယ် သူ့နဲ့ဝေးပြီးနောက်ပိုင်း..ချောင်ကပ်ပြီးငိုခဲ့ရပေါင်းများစွာနဲ့ပေါ့။ သူ့ကို ကျမ ခုချိန်ထိ အိမ်မက်ထဲမှာတွေ့နေရတယ်တစ်ကယ်တော့.သူ့က.ကျမရဲ့အိမ်မက်ထဲကလူပါ။ […]
May 27, 2020 PP Comments Off on ယောကျာ်းလေးတွေ သူတို့ချစ်တဲ့သူကို ချစ်ရက်နဲ့လက်ထပ်ဖို့မရွေးချယ်တဲ့အကြောင်းရင်းများ
ဘဝလက်တွဲဖော်ရွေးချယ်တဲ့အခါ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူထက် ကိုယ်နဲ့တစ်ဘဝလုံးအဆင်ပြေမယ့်သူကိုရွေးချယ်တတ်ကြပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေမှ အိမ်ထောင်ဖက်ကိုရွေးချယ်တာမဟုတ်ပါဘူး၊ ယောကျာ်းလေးတွေလည်း အိမ်ထောင်ဖက်ကိုရွေးချယ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် တချို့ယောကျာ်းလေးတွေ သူတို့ချစ်တဲ့သူကတစ်ယောက်၊ လက်ထပ်ဖို့ရွေးချယ်တဲ့သူကတစ်ယောက် ဖြစ်နေတတ်တာပါ။ ယောကျာ်းလေးအများစု သူတို့ချစ်တဲ့သူကိုချစ်ရက်နဲ့ လက်ထပ်ဖို့မရွေးချယ်ကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့ …. (၁) ဘဝအခြေအနေကြောင့် ချစ်ရဲ့သားနဲ့လက်ထပ်ဖို့မစဉ်းစားတာဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဘဝအခြေအနေမတူတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်ချစ်တဲ့အခါ အဆင့်အတန်းတွေ၊ အခြေအနေတွေက အရေးမကြီးဘူးဆိုပေမယ့် ဒီလိုမျိုး ဘဝအခြေအနေကွာဟခြင်းက ရေရှည်မှာအဆင်မပြေနိုင်ဘူး၊ သာယာတဲ့အိမ်ထောင်ရေးကို မရနိုင်ဘူးလို့တွေးမိကြတာကြောင့် လက်ထပ်ဖို့ နောက်ဆုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ (၂) နေထိုင်မှုပုံစံကွာဟခြင်းကြောင့် လူနှစ်ယောက်က ချစ်သူ၊ရည်းစားတွေအဖြစ်တွဲကြတဲ့အခါမှာ […]
May 27, 2020 PP Comments Off on အရည်အချင်းရှိတဲ့ယောကျာ်းတွေ တန်ဖိုးထားလက်ထပ်ချင်တဲ့မိန်းကလေးဆိုတာ …
ယောကျာ်းလေးတွေဟာ သူတို့ဘယ်လောက်ပဲချစ်ချစ် အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ်ရွေးချယ်လို့အဆင်မပြေတဲ့သူကို လက်ထပ်ဖို့မစဉ်းစား ကြပါဘူး။ အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ်၊ လက်တွဲဖော်အဖြစ်ရွေးချယ်တဲ့အခါ အခုလို အချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ မိန်းကလေးမျိုးကို ရွေးချယ်တတ်ကြပါတယ်။ (၁) ပြင်ပရုပ်ရည်သွင်ပြင်ကိုဂရုစိုက်တဲ့သူ အလှအပကိုအရမ်းဦးစားပေးလွန်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကြည့်ကောင်းနေအောင် ၊ လူအမြင်မှာတင့်တယ်အောင် အမြဲဂရုတစိုက်ရှိတဲ့မိန်းကလေးမျိုး။ (၂) စကားအပြောအဆိုလိမ္မာတဲ့သူ ကိုယ့်ကိုပြောလာတဲ့စကားကို ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲသိတဲ့သူ၊ မိုက်ရိုင်းတဲ့စကားအသုံးအနှုန်းတွေ မပြောတတ်တဲ့သူ၊ ကိုယ့်ကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ပေးလာသူတွေကို ပညာသားပါပါတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့မိန်းကလေးမျိုး။ (၃) ဘဝရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့သူ ကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်လဲ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီး ဘဝကိုပေါ့ပျက်ပျက်မဖြတ်သန်းဘဲ ရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့မိန်းကလေးမျိုး။ (၄) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူ […]
May 27, 2020 PP Comments Off on ဘက်စုံအသုံးဝင်လွန်းတဲ့ငှက်ပျောသီးခွံကို လွှင့်မပစ်လိုက်ပါနဲ့၊ ဒီလိုအသုံးချလိုက်ပါ
ငှက်ပျောသီးမှည့်စားပြီးတဲ့အခါ အခွံကိုလွှင့်မပစ်လိုက်ပါနဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ငှက်ပျောသီးမှည့်အခွံက အဖက်ဖက်ကနေအသုံးဝင်ပြီး ဘက်စုံသုံးလို့ရလို့ပါ။ ငှက်ပျောသီးမှည့်အခွံကို ဒီလိုသုံးပါ။ (၁) ဝက်ခြံပျောက်ဖို့သုံးပါ ဝက်ခြံဖြစ်လို့နီမြန်းပြီးရောင်နေတဲ့နေရာမှာ ငှက်ပျောခွံအတွင်းသားကိုခြစ်ပြီး ကပ်ထားပေးလိုက်ရင် ၁၀ မိနစ်လောက်ကြာရင် နီမြန်းရောင်ရမ်းနေတဲ့ဝက်ခြံက အရောင်လျော့ပြီးသက်သာလာပါလိမ့်မယ်။ (၂) မျက်လုံးတဝိုက်အရေးအကြောင်းပျောက်ဖို့သုံးပါ ငှက်ပျောခွံကိုအဝိုင်းပုံလေးတွေလှီးပြီး မျက်လုံးအောက်နားလေးမှာကပ်ပေးရင် မျက်လုံးနားကအရေးအကြောင်းတွေကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ (၃) လက်ဝတ်ရတာနာတွေအရောင်တင်ဖို့သုံးပါ လက်ဝတ်ရတနာတွေ၊ ငွေထည်ပစ္စည်းတွေအရောင်မှိန်လာတဲ့အခါ ငှက်ပျောခွံအတွင်းသားလေးနဲ့ ပွတ်တိုက်ပေးလိုက်ရင် ချက်ချင်းတောက်ပြောင်သွားပါလိမ့်မယ်။ (၄) အပင်စိုက်တဲ့အခါမြေသြဇာအဖြစ်သုံးပါ ငှက်ပျောခွံကိုအပိုင်းသေးသေးလေးတွေဖြတ်ပြီး မြေကြီးထဲထည့်လိုက်တဲ့အခါ အပင်အတွက်လိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေကို […]
May 27, 2020 PP Comments Off on တစ်လအတွင်း ဗိုက်အဆီကျပြီးခါးသေးသွယ်စေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်း(၅)မျိုး
ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားလှပခြင်းက မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုဆွဲဆောင်မှုပိုရှိစေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်လှပတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဗိုက်နေရာမှာအဆီတွေမရှိဘဲ ခါးလေးသေးသွယ်ကျစ်လစ်နေတာမျိုးပါ။ ဒီတော့ ခါးသေးသွယ်ပြီးဗိုက်အဆီတွေမရှိဘဲ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို တစ်လအတွင်းပိုင်ဆိုင်ရစေဖို့ အခုဖော်ပြတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကို လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ လေ့ကျင့်ခန်း(၁) ပုံမှာပြထားသလို ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာလဲအိပ်ပြီး ခြေထောက်နှစ်ဖက်၊ လက်နှစ်ဖက်ကိုဆန့်တန်းထားပါ။ ပြီးရင် ခြေဖျားနဲ့လက်ဖျားကို နီးနိုင်သလောက်နီးအောင်ထိလိုက်ပြီး နဂိုပုံစံပြန်နေပါ။ အဲ့ဒါကို ၁၂ ကြိမ်လုပ်ပေးပါ။ လေ့ကျင့်ခန်း(၂) ဒူးနှစ်ဖက်ကိုကွေးကာ ကြမ်းပြင်ပေါ်လဲအိပ်ပါ။ လက်နှစ်ဖက်ကိုဆန့်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကိုမ ကာ လက်တွေကိုဘယ်ဘက်ကိုဦးတည်ပြီးရွေ့ပေးပါ။ ပြီးရင် နဂိုပုံစံအတိုင်းပြန်နေပြီး ညာဘက်ကိုတလှည့်လုပ်ပေးပါ။ ဘယ်၊ညာတလှည့်စီ ၁၂ […]
May 27, 2020 daddy Comments Off on “စိတျထားကောငျးရဲ့အကြိုး”
“စိတျထားကောငျးရဲ့အကြိုး” ညီမလေးရဖွေူစငျရိုးသား စိတျထားမြားနဲ့ လောကအကွာငျး လူတှအေကွောငျး ကြားသတ်တဝါ ကွောကျမကျဖှယျရာ အခငျြးအရာတှကေို မသိရိုးသား စိတျထားလေးနဲ့ ကိုယျ့စိတျနဲ့နှိုငျး ခဈြခဲ့မိသလားကှယျ ကာလရှညျကွာ ဖုံးကှယျမရပျေါလာပါတဲ့ အမှနျတရား မြှျောလငျ့မထား ကွားလိုကျရခြိနျ ကမ်ဘာကွီးလညျး ခြာခြာလညျခဲ့ အိမျထောငျတဈခုရဲ့ အိမျဦးနတျတဲ့လား စဉျးစားစရာမလို တှဝေနေဖေို့ မလိုပါဘူးကှယျ အလှဆုံးအပွုံးနဲ့ လှညျ့ထှကျခဲ့ပါ ဒီခြိနျမှာမှ နောကျမဆုတျတတျဘဲ မိုကျမဲတှဝေေ လှတျမခနြိုငျရငျ ဝနျးကငျြလူတှေ ပေးမယျ့ဘှဲ့က စနိုကျမတဲ့လေ ဖွူစငျစိတျထား ရိုးသားလှနျးတဲ့ […]
ကြှနျမဆိုတဲ့ကြှနျမဘဝကမခမျးနားပါဘူး။ ဒါပမေယျ.မာနျ,မာနကိုတော့ ခမျးခမျးနားနားထားတယျ။
May 27, 2020 daddy Comments Off on ကြှနျမဆိုတဲ့ကြှနျမဘဝကမခမျးနားပါဘူး။ ဒါပမေယျ.မာနျ,မာနကိုတော့ ခမျးခမျးနားနားထားတယျ။
ကြှနျမဆိုတဲ့ကြှနျမ ကြှနျမဆိုတဲ့ကြှနျမဘဝကမခမျးနားပါဘူး။ ဒါပမေယျ.မာနျ,မာနကိုတော့ ခမျးခမျးနားနားထားတယျ။ ကြှနျမဆိုတဲ့ကြှနျမ သိက်ခာနဲ့ကိုယျကငျြ့တရားရှိတာမဆနျးပွားပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဘဝသမားတဈယောကျအတှတျတော့ ခွံစညျးရိုးလိုခိုငျခနျ့နမှေဖွဈမယျ။ ကြှနျမဆိုတဲ့ကြှနျမ ခဈြခွငျးတရားရှိတာမထူးဆနျးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သစ်စာတရားဖောကျဖကျြသူတှအေတှတျကတော့ အဆိပျဆူးတဈခြောငျးပဲဖွဈလိမျ့မယျ။ ကြှနျမဆိုတဲ့ကြှနျမ ဘဝကမခမျးနားပမေယျ့ သိက်ခာ,ကိုယျကငျြ့တရား,မာနျမာနနဲ့ သစ်စာတရားတှကေတော့ တခမျးတနားနဲ့ဆနျးပွားပါတယျ။ Nan Khin May Win ကျွန်​မဆိုတဲ့ကျွန်​မ ကျွန်​မဆိုတဲ့ကျွန်​မဘဝကမခမ်းနား​ပါဘူး။ ဒါ​ပေမယ်​.မာန်​,မာနကို​တော့ ခမ်းခမ်းနားနားထားတယ်​။ ကျွန်​မဆိုတဲ့ကျွန်​မ သိက္ခာနဲ့ကိုယ်​ကျင့်​တရားရှိတာမဆန်းပြားပါဘူး။ ဒါ​ပေမယ့်​ ဘဝသမားတစ်​​​ယောက်​အတွတ်​​တော့ ခြံစည်းရိုးလိုခ်ိုင်​ခန့်​​နေမှဖြစ်​မယ်​။ ကျွန်​မဆိုတဲ့ကျွန်​မ ချစ်​ခြင်းတရားရှိတာမထူးဆန်းပါဘူး။ ဒါ​ပေမယ့်​ […]
May 27, 2020 daddy Comments Off on မပွတျသားရငျ အကွိမျကွိမျနာကငျြရပမေယျ့ ပွတျသားလိုကျတာက တဈခါပဲနာကငျြရမှာပါ
မာနကိုဦးမော့ထားပါ ကိုယျ့တနျဖိုးကို နားမလညျတဲ့သူတဈယောကျကို အတငျးအကပျြဖကျတှယျမထားပါနဲ့။ ကိုယျ့အနဈနာခံမူတှကေို တနျဖိုးမထားတဲ့လူတဈယောကျကို ပငျပနျးတကွီးဆုပျကိုငျမထားပါနဲ့။ ကိုယျ့ပေးဆပျမူတှကေို အသိအမှတျမပွုတဲ့လူတဈယောကျကို ရူးမတတျလညျးတှယျတာမနပေါနဲ့။ ကိုယျကတနျဖိုးထားလလေေ လဈြလြူရူခံရလေ… ကိုယျ့ကအနဈနာခံလလေေ အနိုငျယူပွလေ… ကိုယျကခဈြပွလလေေ အပေါစားလျုိ့ထငျလေ… ကိုယျကပေးဆပျပွလလေေ တနျဖိုးမထားလလေမေို့.. စှနျ့လှတျလိုကျတာကပိုမကောငျးဘူးလား…? မိနျးမသားတှဆေိုတာ ဥပက်ေခာထကျအကွငျနာကိုသာလိုခငျြကွတာပါ၊ ခဈြခွငျးတရားကငျးတဲ့ အေးစကျစကျရငျခှငျတဈစုံမှာ ခိုဝငျနမေယျ့အစား နှေးထှေးမူမရှိတော့တဲ့ လကျတဈစုံကိုဆုပျကိုငျနမေယျ့အစား ကွငျနာခွငျးကငျးတဲ့တုနျ့ပွနျမူတှကေို ဖကျတှယျနမေယျ့အစား ကြောခိုငျးလျုကျတာကပိုအေးခမျြးပါတယျ။ မပွတျသားရငျ အကွိမျကွိမျနာကငျြရပမေယျ့ ပွတျသားလိုကျတာက တဈခါပဲနာကငျြရမှာပါ။ လမျးဟောငျးကိုပွဈပွီး လမျးသဈထှငျနတေဲ့လူတဈယောကျကို […]